Rochak Archives - Triveni Online
Home / Rochak
2 weeks ago	Rochak 0
एउटा यस्तो मन्दिर जहाँ मनले चाहेको पूरा हुनेगर्छ बिश्वास नलागे दर्शन गरि एक सेयर गर्नुहोस, भोलि पूरा हुने छ//डिल्लीबजार र ज्ञानेश्वरका बीचमा अवस्थित मैतीदेवी मन्दिरमा नेवार समुदायका वज्राचार्यहरुले पुस्तौँदेखि पूजा गर्दै आएका छन् । उनीहरु मन्दिरको रेखदेखकर्ता र संरक्षकका साथै पुजारीका रुपमा चिनिन्छन् ।मन्दिरको स्थापना विसं ६८५ वर्षमा अंशु वर्माको …
यो संसारमा धेरै प्रकारका मानिस हुन्छन , भनिन्छ मनुष्य योनिमा2प्रकारका मानिस हुन्छन , पुरुष र महिला , तिनिहरुमा यस्तो मान्छे पनि हुन्छन जुन हामी भन्दा केहि फरक हुने गर्छन । जसलाई हामी ट्रांसजेंडर अर्थात तेस्रोलिङगी भन्छौं । . वास्तवमा , ट्रांसजेंडरलाई पुरुष र महिलाहरुको कैटेगरीमा समावेश गर्न सकिदैन …
२ महिना टिभी र फिल्म हेर्दै सुतिदिने २४ जनालाई नासाले तलब दिने , कति दिन्छ तलब ?
काठमाडौ । नासा र युरोपियन स्पेस एजेन्सीले २ महिना टिभी र फिल्म हेर्दै सुतिदिने २४ जनालाई तलब दिने भएको छ । शून्य गुरुत्वाकर्षणको परीक्षणका लागि ६० दिन सुतेरै बिताउने २४ जनाको अहिले खोजि गरिरहेको छ । लामो समयसम्म अन्तरिक्षमा बसेपछि अन्तरिक्षयात्रीका मांशपेशीमा कस्तो कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्ने विषयमा अनुसन्धान र …
3 weeks ago	Rochak 0
ढाका, चैत १४ । बंगलादेशमा एक महिलाले छोरा जन्माएको २६ दिनपछि फेरि दुईवटा बच्चालाई जन्म दिएकी छन् । चिकित्साजगतमा यसलाई चमत्कार मानिएको छ । २० वर्षीय महिलाले हालै छोरालाई जन्म दिएकी थिइन् । सुत्केरी भएको २६ दिनपछि उनले थप दुई बच्चा जन्माएकी हुन् । उनले पछिल्लो पटक जुम्ल्याहा बच्चालाई जन्म …
संसारको सबैभन्दा महंगो सर्प, जसबाट बनाइन्छ यौन क्षमता बढाउने औषधी !
सुनौलो रंग र सुस्त गतिको रेड सेन्ड बोआ नामको सर्पको व्यालक मार्केटमा बीएमडव्ल्यू एक्स कारको भन्दा बढी छ । यही कारणले तस्करहरुसँग यो सर्पको अत्याधिक माग रहेको छ । यसको तस्करी बढीरहेको छ । भारतको बिहारको अररियाका सुरक्षा बलका एक जवानले दुई सर्प पक्रिएका थिए । जसको मूल्य थियो ३ …
काठमाडौँ । समाचारको शीर्षक पढ्दैमा तपाइँ छक्क पर्नुभयो होला । अहिलेको दुनियामा यस्ता देशपनि छन् जहाँ महिलाले ब्रा तथा पेन्टी समेत लगाउन पाउँदैनन् भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रै पर्छ । तर विश्वमा यस्ता देशको कमी छैन जहाँ अझैपनि महिलाहरु निकै तल्लो स्तरको जिवन बाँच्न बाध्य छन् र उनीहरुको स्वतन्त्रता छिनिएको छ …
एजेन्सी । मानिसहरुले जनावरसँग शारिरक सम्बन्ध किन राख्छन् ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । पशु करणी गरेका घटनाहरु बेलाबेलामा सुन्दै आएका छौँ । यसको कारण खोज्ने क्रममा थुप्रै विवादहरु पनि आउँने गर्छन् । मानिसहरुले पशुसँग सम्बन्ध बनाउनुलाई बेस्टिएलिटी भनिन्छ । पशु अधिकारकर्मीहरुले पशु करणी गर्नेहरुलाई हदै सम्म कार्बाही …
OMG: हाँस्न पाइदैन, एक पटक हेर्नुहोस्… हाँसेरै मर्नुहुन्छ (रमाइलो भिडियो)
एक पटक हेर्नुहोस्… हाँसेरै मर्नुहुन्छ (रमाइलो भिडियो तल छ) पछिल्लो समय नेपालमा प्र्यांक भिडियोहरु थुप्रै बन्न थालेका छन् । थाहा पत्तो नदिईकन भिडियो खिचेर दिमाग खराब गराउने प्रचलनलाई रमाईलोको रुपमा हेरिने गरीएको छ । तर, कतिपय प्र्यांकहरु सिमा नाघेर नै निर्माण हुने गरेका छन् । यसलाई व्यंग्य गर्दै एउटा रमाइलो …
नाक तथा मुखबाट हावा लिँदा तथा छाड्दा कसैलाई मतलब हुँदैन । तर जब कसैले मलद्वारबाट हावा छोड्दछ तब यसले नजिकका मानिसलाई दिक्क पार्दछ र हावा छोड्नेलाई लज्जित बनाउँदछ । कहिलेकाहीँ अझ तिखो आवाज र नमिठो गन्ध सहित आउने यस्तो ग्यास समस्याको विषय नै बन्दछ । तर विज्ञहरुका अनुसार यसरी ग्यास …
बेल्जियममा एउटा परेवा १.२५ मिलियन यूरो अर्थात् १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा लिलामी भएको छ । अक्सन (लिलामी) हाउस पिपाले अर्मान्डो नामको यो परेवालाई ‘लामो दुरीको सबैभन्दा उत्कृष्ट बेल्जियमको परेवा’ बताएको छ । साथै यो परेवालाई ‘परेवाहरुको लूईस हेमिल्टन’ पनि बताइँदैछ । यो लिलामी अघि सबैभन्दा महँगो परेवा ३.७६ लाख …